Kuenda kuR & D Period muVocational Education | RayHaber | raillynews
mushaGENERALKuenda kuR & D Period muVocational Education
21 / 05 / 2020 GENERAL, musoro wenyaya, LAST MinUTE, TURKEY
R & D mune dzidzo yehunyanzvi
Mahmut Özer, Mutevedzeri weGurukota reNational Education, akaudza pepanhau nezve hurongwa hwake hwekuparadza chirwere cheR & D hwakatangwa muzvikoro zvepamusoro. Özer akati, "Tichava nenzvimbo dzinosvika makumi maviri dzeR & D. Nzvimbo imwe neimwe inotarisa kune imwe nzvimbo. "
Kubvunzurudzwa kweMutevedzeri weGurukota reNational Education Özer kwakadai seizvi: "Tava kuenda kuR & D nguva yekudzidzira mabasa" Mutevedzeri weGurukota reNational Education Özer akataura kuti ichi chichava chimwe chezvinhu zvakakosha zvekubudirira kwe covid-19 mukudzidziswa kwehunyanzvi. Tichawedzera vatsva tichifunga nezvekugoverwa. Tichava nenzvimbo dzinosvika 20 R&D nzvimbo. Dunhu rega rega rinotarisa pane imwe nzvimbo yakasarudzika. Semuenzaniso, imwe nzvimbo ichangobata nesoftware, nepo imwe ichitarisa pane biomedical kifaa matekinoroji. Iyo inotarisana zvikuru ichave pakugadziriswa kwechigadzirwa, patent, utility modhi, dhizaini uye dhizaini yekugadzira, kunyoresa uye kushambadzira. Isu tichagara tichiwedzera chigadzirwa. "Tichadzidzisa mudzidzisi wedu nzvimbo idzi dzeR & D." Achitaura kuti dzidzo yekudzidzira ichavandudzwa nekukasira mushure mekuita maitiro, software, huchenjeri hwekugadzira hunyanzvi uye hunyanzvi hwe digital, Özer akasimbisa kuti nzvimbo dzeR & D dzichabatsira zvakanyanya mukuvandudza.
Ministry of National Education (MoNE) yakatanga kurwiswa kukuru mumazuva ekurwisa kovid-19 kubuda. Huwandu hukuru hwezvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kumidziyo yehutachiona yaidikanwa pamberi pechikoro, kubva pamaski, kubva pachiso chekudzivirira tangi kuenda kumakanda ekuraswa nemahara. Nenzira iyi, MEB yakaita mipiro yakakosha kwazvo mukudzivirira kwechirwere ichi mumazuva ekutanga ekurwira. Ipapo akaenderera mberi nekugadzira mask yemuchina, mweya filtration mudziyo, vhidhiyo laryngoscope mudziyo kubva kufema. Muchirongwa ichi, icho chinoratidza kukosha kwedzidzo yehunyanzvi yakasimba, Mutevedzeri weGurukota reMoNE Mahmut Özer akatsanangura kuti ndeupi mhando wekugadzirira basa remabasa zvichazoitika mushure mekutumbuka kovid-19.
Munguva yemazuva ekurwa Kovid-19, kudzidzira basa kwakapa kwakabudirira bvunzo. Chii chaunoronga kuitira ramangwana redzidzo yekuita, iyo ine zvakare chiitiko chinoshamisa?
Dzidzo yehunyanzvi yave ichiita mupiro wakakosha nekudzidzisa zviwanikwa zvevanhu nehunyanzvi hwehunyanzvi hunodiwa nemusika wevashandi kwemakore mazhinji munyika yedu. Dzidzo yehunyanzvi yaive nenguva yekushungurudzika kunyanya mushure mekunyorwa kwekushandisa. Munguva ino, dzidzo yebasa yakamira kuve sarudzo yevadzidzi vanobudirira muzvidzidzo. Mumakore akatevera, kushamisika kwechipiri kwakaitika mukushandiswa kwenzvimbo dzekuisa kuzvikoro zvesekondari. Izvo zvakaitika mushure mekunyorwa kwekushandisa kwatanga kudzokorodza, dzidzo yehunyanzvi yakachinjazve kuita sarudzo yekumanikidza kune vadzidzi vasina kubudirira. Maitiro aya haana kukanganisa tsika yevatariri vedu nevadzidzisi muzvikoro zvedu zvepamusoro zvikoro. Dzidzo yehunyanzvi yave inozivikanwa nekuda kwematambudziko, kusaenda kuchikoro kwevadzidzi, uye mhosva dzekuranga. Nekuda kweizvozvo, kusakwanisa kwevakapedza kudzidza kuzadzisa zvinotarisirwa pamusika wevashandi kwakasimbisa maonero asiri iwo akananga kudzidzo yemabasa. Naizvozvo, pakanga paine kurasikirwa kwakanyanya kwekuzvivimba mune dzidzo yehunyanzvi.
Kuzvivimba kwakanyanya kuwaniswazve here mukuita uku?
Ndizvozvo. Chinonyanya kukosha mupiro weichi chiitiko chaive chekudzosera kuzvivimba mumazuva ekare ezvekuremekedzwa edzidziso yehunyanzvi. Akaratidza zvaangaite kana matambudziko ake agadziriswa, achipiwa mikana uye achikurudzirwa. Mukuita uku, yakasvika pakurongwa neyakagadzirwa uye simba rekugadzira, kwete nematambudziko edzidziso yehunyanzvi. Sezvo masangano enhau uye epasi rese anoita seabudiriro, kuzvivimba kwakawedzera. Sekutenda kwezvavanogona kuita, kugadzira, uye izvo zvavanogadzira zvichikosha, kubudirira kwakauya nazvo.
'Yese nzvimbo ichatarisa munzvimbo imwechete'
Nzvimbo dzeR & D dzinozove dzisingagumi mumazuva mushure mekubuda kweKovid-19 here?
Mune dzidzo yehunyanzvi, tava kuenda munguva yeR & D. Ichi chichava chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekubudirira kweKovid-19 kusvika pakudzidzira basa remabasa. Mukuita uku, tinowedzera vatsva kuR & D nzvimbo dzatakadzika, tichifunga nezvekuparadzirwa kwenzvimbo. Zvidzidzo izvi zvava kuda kupedzwa. Tichava nenzvimbo dzinosvika 20 R&D nzvimbo. Dunhu rega rega rinotarisa pane imwe nzvimbo yakasarudzika. Semuenzaniso, imwe nzvimbo ichangobata nesoftware, nepo imwe ichitarisa pane biomedical kifaa matekinoroji. Nzvimbo idzi dzicharamba dzichikurukurirana uye dzinotsigirana. Nzvimbo idzi zvakare dzichava nzvimbo dzepamusoro. Iyo inotarisana zvikuru ichave pakugadziriswa kwechigadzirwa, patent, utility modhi, dhizaini uye dhizaini yekugadzira, kunyoresa uye kushambadzira. Isu tichagara tichiwedzera chigadzirwa. Tichaita zvino kudzidzisa kwedu vadzidzisi kunzvimbo idzi dzeR & D. Nzvimbo idzi dzichabatsirawo zvikuru mukuvandudza zvidzidzo zvehunyanzvi.
Kuvimba kwavo kwakawedzera
Tinogona here kutaura kuti iyo mari iyo MEB yakagadzira mudzidzo yemabasa kwemakore maviri apfuura yakaunza chibereko?
Ehe. Sehushumiri, isu takanyatsotarisana nedzidzo yekuita. Isu takaona zvakakosha kwazvo mapurojekiti imwe mushure meimwe. Kunyanya kukosha, kwenguva yekutanga, takaita kubatana kwakanyanya uye kwakazara nevamiriri vakasimba vezvikamu izvi muzvikamu zvese zvedzidzo. Nekudaro, kuvimba kweaiti muzvidzidzo zvehunyanzvi kwawedzera zvishoma nezvishoma. Matanho ese aya akagonesa kukurumidza, nekubatana pamwe nekushanduka kwemhinduro kugadzirwa mukuita uku.
Ucharonga sei kubva zvino zvichienda mberi?
Tichapfuurira kusimbisa iyo dzidzo-kugadzira-basa denderedzwa mukuita basa rehunyanzvi. Isu tichagara tichivandudza dzidziso mukubatana kwakasimba nemusika wevashandi. Tichaita zvikoro zvedu zvepamusoro zvikoro zvive nzvimbo dzekugadzira. Isu tichaenderera mberi nekuwedzera huwandu hwekugadzira zvigadzirwa nemasevhisi, kunyanya mukati mehuwandu hwemari inoshanduka. Semuenzaniso, muna 2019, isu takawedzera mari yakawanikwa kubva mukugadzirwa mune ino chiyero nemakumi mana muzana kusvika kumamirioni mazana mana TL. Muna 40, ratidziro yedu ndeye 400 bhirioni TL kugadzirwa. Nyaya inonyanya kukosha ndeyekuvandudza huwandu hwevashandi uye mamiriro ebasa evapedza kudzidza mumusika wevashandi. Kubatirana kwatakadzika pamwe nezvikamu zvakanangana nebasa kwakakosha kuita matanho ekutanga kune izvi. Matanho aya anoramba achiwedzera kusimba.
'Zvigadzirwa zvese zvatakatarisana nazvo zvakagadzirwa'
Wakagadzira nzvimbo dzeR&D muzvikoro zvepamusoro zvikoro. Chii chaive chinangwa?
Mubairo wekudzidzira basa mumazuva ekurwisa Kovid-19 waive nemaviri. Chikamu chekutanga chaisanganisira kugadzirwa kwemazhinji uye kuburitsa maski inodikanwa, disinfectant, toni yekudzivirira kumeso, yaanogona kuisa apron nemahara. Iyi nhanho yakabudirira kwazvo uye zvigadzirwa mumamiriro ezvinhu aya zvichiri kuenderera mberi. Chikamu chechipiri chakatarisana nekugadzirwa uye kugadzirwa kwemidziyo yakaita sedzemuchaputa uye masiki michina inodiwa kurwisa kovid-19. Kuti tibudirire muchikamu chechipiri, takamisa nzvimbo dzeR & D mukati medzidziso medu uye dzehunyanzvi Anatolian zvikoro zvepamusoro mumatunhu edu ane matunhu akasimba. Isu takasimbisa zvivakwa zveR & D nzvimbo dzekugadzira uye kugadzira kwezvakagadzirwa izvi. Ongororo dzakadzama dzakaitwa munzvimbo idzi dzatakadzika mumaguta edu seIstanbul, Bursa, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Konya, Mersin, Muğla naHatay. Munzvimbo idzi, takakwanisa kuburitsa zvigadzirwa zvese zvatakatarisana nazvo. Muchirevo chechinyorwa chino, zvigadzirwa zvakawanda zvakagadzirwa uye kugadzirwa zvakadai semuchina wekuvhiya mask, kufema, N95 standard maski muchina, vhidhiyo laryngoscope chishandiso, yakanyanya chengetedzo yemubhedha, mhepo filtration mudziyo, sampling unit.
Uchifunga nezve shanduro yezvidzidzo, iwe uchaita nyowani nyowani, uchifunga kuti musika wevashandi uchaitika mushure mekupinda muKovid-19?
Ehe saizvozvo. Mushure meichi chiitiko uye kuchave nekukurumidza kurudziro yekuvandudzwa kwehunyanzvi hwejitadhi. Isu hatitarise mabasa ehunyanzvi uye ehunyanzvi ehukama semasangano unongopihwa dzidzo yehunyanzvi. Tinoda kuti vadzidzi vedu vese vawane hunyanzvi hwekugona kuitira kuti vakwanise kuchinjika nekuchinja kwetekinoroji nemagariro. Tinoda kuderedza musiyano uripo pakati pehunyanzvi uye hwenhando dzidzo pamusoro penguva. Nekudaro, isu tinobatsirana neese ari maviri tekinoroji uye edhisheni masangano akasimba akadai ITU uye ASELSAN. Hunyanzvi hunodiwa zvichienderana neruzivo rwehunyanzvi hwebindu mumusika webasa rinozowedzerwa kune ikharamu mune zvese zvirevo zvatinodzidzisa. Nekudaro, hatizogutsikane neizvi, asi isu tichashanda kusimbisa hunyanzvi huwandu hwevadzidzi vedu.
Zuva rokutakura rinotanga kuKocaeli
Mahmutbey tolls munharaunda yekusununguka
Akçaray Akafambisa Nenguva Yenguva
Paruzhinji Inotakurwa muSakarya Inosvika Pagadziri Period
Kudzivirira Kupesana neCoronavirus ..! Kusafambidzana Nguva yekufamba Yakatangwa muBursaRay
TCDD's Subsidiaries Reza Dzidzo
Purogiramu yeKubatanidzwa mu Dzidzo pakati peTCDD neYunivhesiti yeAnkara
Kufambira mberi kuhuwandu hwekugadzirwa kwemotokari yemotokari itsva
Iyi itsva mvumo yemotokari muHalkapınar
Nzvimbo dzekupedzisira Darika kuKonak Tram
120 Zviuru Vanhu Vanofambidzana Neusiku Rwendo muAntalya ... 9 Kubva kuZuva Remazuva munaSeptember
TÜVASAŞ General Manager İbrahim Ertiryaki achamisa chibvumirano chekutengeserana nenyika dzakavakidzana.
Sakarya Starts Survey Period yeGreater Public Transport
MOTAŞ akagadzirira dzidzo itsva
KUNYARA KUNYANYA KUNA KUVARIRA KUCHIKAMU CHAKANAKA
biomedical mudziyo matekinoroji
mhepo kuchenesa mudziyo
Vocational zvikoro zvepamusoro
R&D nzvimbo muzvikoro zvepamusoro mabasa
N95 mask mashini
vhidhiyo laryngoscope chishandiso
zvemagetsi ekugadzira hunyanzvi
Yakanyanya Kurara Mubhedha
TİGEM Ceylanpınar Irrigation Project iri Kuenda kuHupenyu Mangwana
Taksim Tunaki Nostalgic Tram Services Yakatangwa
Zynga Inowana Turkish Gaming yeKambani Kuta Mitambo!
Mitsubishi Motors Corporation (MMC), ichitaura kuti zvinokwanisika kutsigira kudyidzana pakati pevashandi vepachivande, veruzhinji uye vezvedzidzo kuitira kudzivirira kupararira kweCOVID-19; mishonga yekurapa, vaccin, yekurapa [More ...]
Mehmet Emin Horoz Vocational and Technical Anatolian High School Vanoshanyira Hongaria Rail Cargo
Vaimbi veSteamboat Vanosarudzwa
Satso Professional Promotion uye Career Days
Atatürk Vocational and Technical Anatolian High School Vanoshanyira TÜDEMSAŞ
Mehmet Emin Horoz Vocational uye technical Anatolian High School Rail